Wakiilka Gareth Bale oo kala caddeeyey mustaqbalka ciyaaryahanka iyo haddii uu laacibku ka tagayo xagaagan kooxda Real Madrid – Gool FM
Wakiilka Gareth Bale oo kala caddeeyey mustaqbalka ciyaaryahanka iyo haddii uu laacibku ka tagayo xagaagan kooxda Real Madrid
(Madrid) 15 Maarso 2019. Wakiilka Gareth Bale ayaa kala caddeeyey mustaqbalka ciyaaryahanka iyo haddii uu laacibku isaga tagi doono kooxda kubadda cagta Real Madrid xagaagan.
Jonathan Barnett oo ah wakiilka Gareth Bale ayaa shaaca ka qaaday in Weeraryahanku uu doonayo inuu xirfaddiisa ciyaareed oo dhan ku soo gabagabeeyo kooxda Real Madrid, iyadoo warar dhowaan gal ah oo soo baxayey ay sheegayaan in laacibku dib ugu laabanayo horyaalka Ingiriiska ee Premier League.
Xiddiga xulka qaranka Wales ayaa mustaqbalkiisa garoonka Bernabeu uu markale dib u soo ifay kaddib markii uu todobaadkan kooxda dib ugu soo laabtay Tababare Zinedine Zidane.
Bale ayaa hoos uga dhacay xulashada macallinka reer France qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore, waxaana uu qirtay kaddib markii uu ciyaaray final-kii Champions League inuu doonayay inuu dhaqaaqo xagaagaas.
Zidane ayaa markale dib ugu soo laabtay hoggaanka kooxda Real Madrid Isniintii kaddib markii uu ay Los Blancos wadi kari waayeen labada tababare Julen Lopetegui iyo Santiago Solari, waxaana soo baxay markii hore suurto-galnimada ku saabsan in Manchester United iyo kooxdiisii hore ee Tottenham Hotspur ay la wareegi karaan Bale.
Yeelkeede, 29-sano jirkaan ayaa rabitaankiisa ugu wayn waxa uu yahay inuu sii joogo Caasimadda Spain, xitaa haddii uu bartilmaameed u ahaa kooxaha Premier League todobaadyadii la soo dhaafay.
Mar la weydiiyey wakiilkiisa inuu laacibku sii joogayo Real Madrid xagaagan ayuu Barnett u sheegay BBC Sport: “Haa, maxaysan u ahayn?, isagu waxa uu doonayaa inuu xirfaddiisa oo dhan u ciyaaro Real Madrid, haddii aysan ka shaqeynin waanu hadli doonaa markale, waxa uu la hadli doonaa Mr Zidane, kaddibna waan arkaynaa dhammaadka xilli ciyaareedka.
“Gareth waxa uu doonayay inuu u ciyaaro hal dhinac, Zidane waxa uu doonayay inuu markale ka hoos ciyaaro, taas ayaana sabab u ahayd inuu qaato muddo badan oo waqti xun, haddii aad u ogolaato Gareth inuu ciyaaro sida uu doonayo inuu ciyaaro, ma’ahan in uu baxo, wuxuu ku noqon karaa halkaan Cristiano Ronaldo.
“Weli waxa uu leeyahay xirfad dabiici ah oo weyn, Gareth aad ayuu u xooggan yahay, mana ka warhayo waxa Saxaafaddu sheegayso.”
Bale ayaa 101 gool u dhaliyey kooxda Real Madrid tan iyo markii lacag rikoor ah oo dhan 85 milyan oo gini ay uga soo qaateen naadiga Tottenham sanadkii 2013-kii.